Colombar - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
I-Colombar iyinhlobonhlobo yewayini elimhlophe eyaziwa kangcono ngokukhiqizwa kwewayini e-distilled, njenge-brandy ne-cognac. Ngenye yezinhlobonhlobo ezitshalwe kakhulu eNingizimu Afrika futhi yasungulwa kusukela ekuhambeni kweChenin blanc noHeunisch Weiss (owaziwa ngokuthi iGouias blanc).
Bordeaux eFrance. Ezihlukahlukene, ngasekupheleni kwawo-1970, zalahlekelwa umusa eFrance, okuholela ekungaphezu kwesigamu sezimila ezixoshwa.
Kutshalwe eNingizimu Afrika kusukela ngo-1920 futhi yayisetshenziselwa ngokuyinhloko iwayini eliyisisekelo sokukhiqizwa kwe-brandy kwaze kwaba ngawo-1970, lapho abenzi beCape Wine beyitholile ingaveza amawayini amnandi kakhulu okuphuza.
Izinhlobonhlobo zihamba kahle ngaphansi kwezimo zezulu ezifudumele. Kutshalwe kuzo zonke izifunda ezikhiqiza iwayini eNingizimu Afrika, kanye noMfula u-Olifants, iNorthern Cape, uRobertson noBreedekloof ukubalwa kwezindawo ezinkulu ngaphansi kokukhiqizwa.
Ungumlimi okhuthele, onokuvuna okulinganiselwa ku-15 t / ha kuya ku-20 t / ha. Izithelo eziphakeme zifinyelelwa kwezinye izindawo.
Amagilebhisi avuthwe phakathi kwe-midseason, kusukela engxenyeni yokuqala ka-Mashi.
Amajikijolo akhambisane nesikhova esifushane, esingajwayelekile kanye nohlaza oluhlaza okwesibhakabhaka, esinombala obomvu uma uvuthiwe ngokugcwele. Isikhumba sincane futhi sinzima, kanti inyama iqinile futhi ihlanzekile, enezinga eliphezulu le-acid uma livuthiwe.
Amaqabunga ahlaza okwesibhakabhaka, aphakathi nendawo futhi azungeze cishe kufane nezinso.
Izinhlobonhlobo zithinteka umonakalo womoya ngesikhathi sokuvuna kanye nesithwathwa entwasahlobo. Kuyinto enamandla ngokumelene botrytis, downy isikhutha kanye powdery isikhutha. Imiphumela emihle ifinyelela lapho izivini ziqhutshwa.
Kungasetshenziselwa ukukhiqizwa kwewayini elilodwa le-varietal, iwayini elichithiwe, njenge-brandy, iwayini elikhazimulayo noma iwayini elihlanganisiwe.
Izinhlobonhlobo zikhiqiza i-brandy enhle kakhulu newayini nge-flavour ekhanda.